Free Nay Phone Latt: ကူညီတတ်သော နေမျိုးကျော် (ခ) နေဘုန်းလတ် အတွက် အဖေ့ပေးစာ
ကူညီတတ်သော နေမျိုးကျော် (ခ) နေဘုန်းလတ် အတွက် အဖေ့ပေးစာ
နေဘုန်းလတ်အတွက် ဖခင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ရေးသား ပေးပို့သောစာကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
သားတစ်ယောက်အချူပ်အနှောင်ခံရပြီဆိုကတည်းက အဖေတစ်ရောက်အနေဖြင့် ခံစားရပါသည်။ အဖေ့အတွက် သိရသလောက် နေမျိုးကျော်ဟာအများအကျိုးအတွက်ကို အမြဲကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသူ တစ်ဦးပါ။ ပရဟိတဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာသူ့သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ. ပေါင်းပြီး လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်းခဲ့တာတွေ၊သွေးလှူရှင်တွေစုစည်းပြီးလိုအပ်တဲ့အခါ သွေလှူဒါန်းတာတွေ၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူတွေကို ပညာဒါနပေးလှူခဲ့တာတွေ ကောင်းတာတွေချည်း လုပ်နေသူပါ။ သူ့ကို ဘယ်သူကအကူအညီ တောင်းတောင်း ခေါင်းခါပြီး မငြင်းဘူးခဲ့သူပါ။ အဲဒီလိုအကူအညီပေးတတ်တဲ့သား နေမျိုးကျော် ဟာ ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး ခံစားနေ ရပါပြီ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ. ၀ဋ်ကြွေးရှိ ခဲ့လို့ ခံရတာပဲလို့ ဖြေသာပေမဲ့ အဖေတစ်ယောက် အဖို့ အများအကျိုးဆောင်ရွက်ပြီး မကောင်းတာဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့ သားအတွက် ခံစားချက်က ပြင်းထန်လှ ပါတယ်။
မွေးပြီး ၁ နှစ်နဲ့ ၆ လ လောက်ကတည်းက အဖေနဲ့ အတူ အိပ် အတူစား ၊ ညဘက်မအိပ်တတ် ကလေးဘ၀ကတည်းက အဖေနဲ့ အတူညဘက်ကစားပြီး ၊ ညအချိန်တွေကို ကျော်လွှားခဲ့တဲ့ ဖအေ နဲ့ သား ဘ၀ပါ။ ဘယ်သူမွေးတာလဲ မေးတာတောင် အဖေမွေးတာလို့ သိတတ်တဲ့ အချိန်ထိ ဖြေနေ သေးတဲ့သားပါ၊ အဲဒီလို သား ဟာဘာမှန်းမသိတဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုနဲ့ ကံကြမ္မာရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး အကျဉ်းအကျပ်ထဲ ရောက် ခဲ့ရတာပါသားရယ်....။
အဖေဘယ်လိုဖြေရမလဲသားရယ် ......... ၊ စားလည်းဒီစိတ်၊ သွားလည်းဒီစိတ်၊ အိပ်လည်းဒီစိတ်နဲ့ ဖြေစရာ မရှိခဲ့ပါဘူး၊ အဖေ ထမင်းစားချိ်န်ဆိုရင် သားတစ်ယောက် ပန်းကန်ခွက်ယောက် မပြည့် မစုံနဲ့ ထမင်းစားနေရတာတွေ အဖေအိပ်တော့လည်း အဖေ့မှာမွေှ့ယာ ခြင်ထောင်အပြည့် သားမှာ သံမံတလင်းကို မွှေ့ယာထားပြီး ခြုံစရာစောင်မရှိ အေးမြတဲ့အချမ်းဒါဏ်ကိုခံစားပြီး အိပ်နေ ရတဲ့အဖြစ်၊ စားတိုင်းအိပ်တိုင်း တွေးမြင်နေရတဲ့ အဖေ့မှာ ဘယ်လိုအိပ်လို ဘယ်လိုစားနိုင်မှာလဲ အချိန်နဲ့အမျှ သွားမှုလာမှု နေထိုင်မှု ဒုက္ခအ စုစုကို ခံစားနေရတာကို အဖေအချိန်နဲ့အမျှ ခံစားနေရတာပါ အကျဉ်းအကြပ်ထဲမှာ သားဘယ်လိုခံစား နေရမလဲလို့ သားမရှိတဲ့နေ့ကတည်းက အဖေတွေးပြီး ခံစားနေရတာပါ။ ဒါတွေဟာ ချစ်ခြင်းရဲ့ဒုက္ခတွေ ဘဲပေါ့။ သားကိုအဖေကချစ်တာကို။
ခေတ်စနစ်ရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ထဲမှာ မှန်တာပြော ဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေ အကျဉ်းကျခံနေရတာ ရင်နာစရာပါ။ ဒီခေတ်ဒီစနစ်ကြီး ဘယ်တော့ပြီးဆုံးသွားမှာလဲ။ အမြန်ဆုံး ပြီးဆုံးချင်ပါပြီသားရယ်။ သားနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး သားရေးတဲ့စာတွေကို အဖေဖတ်သလို အများလည်းဖတ်စေချင်ပါတယ်။ နေဘုန်းလတ်ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည် နဲ့ သားရေးခဲ့တဲ့စာတွေဟာ အင်တာနက် ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့သူတွေ ဗဟုသုတ တိုးတက်စေဖို့ အတွေးအမြင် ကျယ်စေဘို့ ရေးခဲ့တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစာတွေ ဆိုတာ အဖေနားလည်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတိုင်းပြည်အပေါ် စေတနာထားတဲ့ သူမျိုးကို အငြိုးတကြီး မတွေ့ရ မမြင်ရ အကျဉ်းခံထားထားတာကိုတော့ အဖေဘယ်လိုမှနား လည်လို့မရဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ တိုင်းပြည်အပေါ် စေတနာထားလုပ်တတ်တဲ့သူတွေ တိုင်းပြည်သာယာဖို့အနစ် နာခံတတ်တဲ့သူတွေ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အများကောင်းစားဖို့ စိတ်စေတနာရှိကြတဲ့သူတွေ ပေါများလာပြီး တိုင်း ပြည်ကြီးပြုပြင် ပြောင်းလဲလာပါစေဟု ဆုတောင်းရင်း သားအတွက် ရင်နှင့်အမျှ ခံစားနေရတဲ့ အဖေ ဒီစာကို ရပ်နားလိုက်ပါရစေ...။ ။
ထပ်တူခံစားရပါတယ်၊၊ နေဖုန်းလတ်မိဘတွေအတွက်လဲ သားကောင်းသားမြတ်တစ်ယောက် မွေးဖွားနိုင်ခဲ့လို ဂုဏ်ယူပါတယ်၊၊